Hotel Kakslauttanen sy ny tanàna igloo fitaratra | Vaovao momba ny dia
Ireo sarin-dranomaso ao amin'ny Hotel Kakslauttanen
Maria Jose Roldan | | Failandy
Mbola tadidiko fony mbola tany amin'ny sekoly ambaratonga voalohany aho hoe inona no tiako hatao sary an-tsaina hoe ahoana ny hoe miaina anaty igloo ary manintona igoa miaraka amin'ny jono eskim Eskimos raha mipetraka am-paharetana ao anaty boaty hazo miandry ny trondro handalo ao ambanin'ny vatomandry aho. Fa mazava ho azy, io dia fomba iray an-tsaina fotsiny hoe nanao ahoana ny igloos. Ankehitriny, azoko an-tsaina ireo hafa, ny igloos fitaratra an'ny Hotel Kakslauttanen.
Rehefa hitako io hotely io niaraka tamin'ny igloos fitaratra dia raiki-pitia tamin'io toerana io avy hatrany aho ary rehefa hitako ny zavatra nafenin'izy ireo tao aorian'izy ireo sy ny zavatra afaka mankafy ianao noho ireo domes fitaratra… mbola tsara lavitra noho ny nieritreretako azy io tamin'ny voalohany.
1 Hotely Kakslauttanen
2 Ireo sarin-dranomaso ao amin'ny Hotel Kakslauttanen
3 Ny aurora borealis ambonin'ny lohanao
4 Mangatsiaka loatra ve?
5 zavatra ilaina
The Hotel Kakslauttanen dia trano fandraisam-bahiny iray fianakaviana any Lapland, Failandy. Any avaratry ny Arctic Circle no misy azy, ka raha te hahita azy ianao dia mety mila mandalo hatsiaka na hafanana toy inona aza, indrindra raha tsy zatra an'ireny toetrandro mangatsiaka be ireny ianao. Misaotra noho izy ireo lavitra ny zava-drehetra, afaka mankafy tontolo tsy dia hitanao any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao ianao.. Fa na dia lavitra ny zava-drehetra aza izy ireo dia manana fifandraisana tsara izy ireo ka tsy ho tsapanao mihitsy hoe very eo afovoan'ny toerana ianao amin'izay fotoana izay.
Ny seranam-piaramanidina akaiky indrindra dia ilay any Ívalo ary 30 minitra fotsiny avy eo amin'ny hotely, ary manana fitambarana tsara ihany koa izy ireo mba hahafahan'ireo mpitsidika mandeha tsy manana olana.
Ary na dia mieritreritra aza ianao fa eo afovoan'ny tsy misy toerana, ny marina dia manana ny zava-drehetra noforonina ny hotely mba hahatsapanao ho any an-trano. Azonao atao ny misafidy ny mandeha any amin'ny trano fisakafoanana, ny setroka sigara, ny fivarotana fahatsiarovana, manao ski ambony, milomano, sns.
Ny tanàna kristaly igloo an'ny Hotel Kakslauttanen Manolotra mpizahatany iray i Finlandy amin'ny iray amin'ireo trano faran'izay mahatalanjona any Eropa sy manerantany, na ny maha-izy azy na ny toerana misy azy - ao afovoan'i Lapland. Noho io antony io ihany dia ilaina ny mahazo fampahalalana mba hankafizanao ireo fialan-tsasatra mahavariana indrindra azonao atao izao. Ary eny, izy ireo dia mety ho ilay mahavariana indrindra tsy misy torapasika paradisaacal na daiquiri eny an-tànana rehefa milentika ianao. Hafa mihitsy ity fomba fankafizana ity, ary mendrika ihany koa….
Ny aurora borealis ambonin'ny lohanao
Ny vahiny ao amin'ny Hotel Kakslauttanen dia manana fotoana mety hisaintsainana ny lanitra feno kintana mahavariana sy mahafinaritra Aurora borealis, mahazatra an'io faritra eto amin'ny planeta io. Azonao atao ny mankafy azy amin'ny fampiononana sy hafanan'ny fandriany, noho ny famolavolana ireo igloos.
Ny taova fitaratra misy tafo fitaratra sy rindrina mba hahamora azy ny mijery ny lanitra sy ny endrika. Izany no hahatonga azy io ho efitrano fandraisam-bahiny tsara indrindra nandehananao. Ny fahitana voajanahary izay azonao atao amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro dia mampino ary mendrika ny mandeha na dia indray mandeha amin'ny fiainanao aza. Izy ireo dia sary izay hosoratana ao amin'ny retinao ary hiaraka aminao ao am-ponao mandrakizay.
Mangatsiaka loatra ve?
Ny hatsiaka dia tsy ho olana amin'ity trano fandraisam-bahiny Finnish tsara tarehy ity, hatramin'ny 20 igloos mandrafitra ny tanàna dia vita amin'ny vera mafana, izay mitazona mari-pana mafana sy mahafinaritra ao anatiny izy, na dia any ivelany aza dia mahatratra -29 ºC. Ka raha tsy mikasa ny handeha hitsangatsangana ianao fa te hankafy ny hakanton'ireo sary ireo sy ny Jiro Avaratra, dia mety tsara ho anao ireo hotely ireo.
Raha mankany amin'ity hotely hafahafa ity ianao dia voahodidin'ny natiora, namboarina izy ireo mba hiteraka fiatraikany kely indrindra amin'ny tontolo, filozofia momba ny tontolo iainana izay misy ihany koa amin'ny fanjifana angovo kely ilaina amin'ny fanafanana ny efitrano kely tsirairay, mahazaka olona roa.
Ho fanampin'ny igloos ao amin'ity faritra Lapland ity dia afaka mahita kabine tsara sy ahazoana aina ihany koa ianao izay tafiditra ao afovoan'ny natiora. Ny tadiavina amin'ny igloos sy cabins dia ny fanajana ny natiora arak'izay azo atao mba ho toy ny fampifangaroana eo amin'ny fizahan-tany sy ny fanajana ny natiora ny trano fandraisam-bahiny.
Na dia tsara sy mahazo aina aza ny kabine, dia hahatonga anao ho eo afovoan'ny natiora miaraka amin'ny fomba fijery tsy mampino, Izaho manokana dia nisafidy ny hijanona in-droa tsy misy fisalasalana ao amin'ny igloos fitaratra.
Marihina fa ny trano fandraisam-bahiny, na dia mivarotra aza ny ahitanao ny Jiro Avaratra, dia tsy manome antoka ny fahitana azy, satria na dia mitazona hatrany ny toetr'andro aza izy ireo, dia tsy fantatrao mihitsy raha hitanao izany miankina amin'ny fomba ny lanitra dia. Na dia efa nomaniny tsara aza ny zava-drehetra, satria raha hita izany, Maneno lakolosy fanaovana sonia ho an'ny mpitsidika izy ireo mba hahafahan'izy ireo manopy ny lanitra rehefa miseho ilay tranga mahatalanjona.
Ny trano fandraisam-bahiny lehibe koa dia ahitana ny setroka setroka lehibe indrindra manerantany, miaraka amin'ny trano fisakafoanana misy azy ary fisotroana ranomandry miavaka ary koa trano fiangonana misy lanezy izay atsangana isaky ny ririnina.
Ho an'ireo mpitsangatsangana bebe kokoa, ny trano fandraisam-bahiny koa dia manolotra trano fonenana amina am-polony igloos izay vita amin'ny ranomandry. Ireto trano ranomandry ireto dia manana mari-pana anatiny ahazoana aina ka tsy mila mangatsiaka ianao raha te hijanona amin'ity karazana igloo ity.
Raha namaky ity lahatsoratra ity ianao dia satria liana amin'ity trano fandraisam-bahiny mahavariana ity ianao na dia any amin'ny Tendrontany Avaratra aza. Raha izany dia tsy maintsy manao fotsiny ianao midira ny tranokalanao ary jereo ny zavatra rehetra atolotr'izy ireo anao hahafahanao mijanona sy mankafy fialantsasatra mahagaga sy majika. Inona no andrasanao? Jereo ny kalandrie ary tadiavo ny fialantsasatra tokony handaminana ny dianao mankany amin'ity toerana idyllic lavitra ny zava-drehetra ity ary miaraka amin'ny fomba fijery tsy mampino.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Failandy » Ireo sarin-dranomaso ao amin'ny Hotel Kakslauttanen
Zon'ny mpandeha an'habakabaka